Ishidi elikhishwe ngosimende - iDivenland
Iphaneli Entsha Yesakhiwo Esilula Esingasindi
Kubhekiswa emapheshana akhethiwe wezindonga zokwahlukanisa ezingathwali umthwalo ezingaphakathi zezakhiwo zezimboni nezomphakathi ezenziwe ngezinto ezingasindi noma isakhiwo esikhanyayo, ezinama-mortise kanye ne-tenon grooves nama-groove ahlanganisiwe ezinhlangothini zombili nobukhulu bomhlaba abuphakeme kunenani elijwayelekile (90 kg / m2: amabhodi angama-90; i-110 kg / m2: amabhodi we-120), nezinto zokusetshenziswa ezisetshenziswayo zizohambisana nenkampani ye-G / T169-2005 standard.Our ethuthukiswe ngokukhethekile imikhiqizo ye-cellulose ether nemikhiqizo ye-latex yensimu yamaphaneli asodongeni amasha . Ukusebenza kahle kwebhodi lodonga kuyinika amandla okuhlanganisa aphezulu nokuthambisa. Iphinde ithuthukise amandla amanzi odaka nokunamathela kwebhodi ngemuva kokukhishwa. Kungukukhetha kokuqala kwamabhodi we-wallboard asindayo ajwayelekile namabhizinisi we-wallweight wallboard.
I-FS formwork yaphakade ifomu langaphandle ku-situ uhlelo lokukhonkolo lokwakheka
I-FS yangaphandle eyakhiwe yangaphakathi yokwakheka kokufakwa kwamakhonkrithi ingaphandle lendawo ifomu lokufaka insimbi elakhiwe ngokuhlangana usimende olususelwa ezinhlangothini ezimbili. Kuthululelwa ukhonkolo ngaphakathi, kusula ungqimba lodaka oluvikelayo ongaphandle, futhi kuxhumeke ngokuqinile ukwakheka kokufakelwa okwenziwe nge-compactite kakhonkolo nokhonkolo ngokusebenzisa izixhumi. Ngokubambisana nokwakheka kohlelo lokufakelwa kokushisa okushisayo. Uhlelo lolohlelo lwesakhiwo sokuqinisa ukhonkolo oluhlanganisiwe, olusebenza kohlaka lwezakhiwo zezimboni kanye nezomphakathi, isakhiwo sodonga lwe-shear semisebenzi yokwakheka kokhonkolo i-In-situ njengezindonga zangaphandle, amakholomu nemishayo.